Ukudumba kwebhetri ye-iPhone Ndenza ntoni? | IPhone iindaba
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo kwiibhetri ze-lithium-ion kukuba banokudumba ukuya kwinqanaba lokuqhushumba isikrini. Yiyo kanye le nto kwenzeke kum kutshanje kwi-iPhone X ethengwe ngo-Novemba ka-2017Sikwi-2020 ke iwaranti ayigubungeli ukulungiswa.
Apha kanye ngeli xesha kuphakama umbuzo: ngaba uyazilungisa okanye usise kwinkonzo yobugcisa? Kuzo zombini iimeko inye into ekufuneka icacile, kule mihla iibhetri azibizi kakhulu kwaye ngokuthe ngqo kwi-Apple SAT ngokuxhomekeke kwimodeli inokwahluka phakathi kwe-55 kunye ne-75 ye-euro. Ingcebiso yam (unokwenza nantoni na oyifunayo) kukuba uyise ngqo kwiApple okanye kwivenkile eqinisekisiweyo yinkampani yeCupertino yokulungisa olu hlobo.
Ngale ndlela, baninzi abasebenzisi abanokufumana inkonzo ibhetri ibiza kakhulu kwaye akukho nzima ukuyitshintsha, kodwa kunokuba yingozi ukuba ngempazamo sihlabe le bhetri idumbileyo. KwiVenkile yeApple esemthethweni abalwenzi olu hlobo lomsebenzi wokulungisa kwaye isixhobo sithunyelwa kwiziko elikhethekileyo ukunqanda iingxaki. Kwimeko apho ibhetri igqityiwe, bayayitshintsha evenkileni, kodwa kwimeko yeebhetri ezidumbileyo akukho khetho lokwenza njalo, bathunyelwa ngaphandle.
Njengoko ndisitsho ngenxa yexabiso elinalo ibhetri engekho mthethweni kunye nexabiso lokulungiswa kwevenkile yeApple, ingcebiso kunye nento ekufuneka siyenzile kukuthatha ivenkile ukuyiphepha iingxaki. Kwimeko apho ungasoloko unayo ivenkile kufutshane Ungathumela i-iPhone ngenkonzo ye-Apple kwiwebhu, kodwa oku kuneendleko ze-euro ezingama-12 ngaphezulu Oko kufuneka kongezwe kwi-55 okanye kwi-euro ezingama-75. Nokuba kunganjani na, eyona ilungileyo kule meko ayikokuba semngciphekweni kwaye oku, ukuthatha isixhobo kwiVenkile yeApple- ndiyakholelwa ngokobuqu-lolona khetho lufanelekileyo.
Linda ngaphandle kwe-iPhone malunga neentsuku ezili-14 ezithatha ukulungisa okanye ukuthumela esinye isixhobo esihlaziyiweyo yenye yeengxaki ezinxulumene nokudumba kwebhetri. Ngokukhawuleza xa ndinesisombululo se-iPhone X yam ndiza kwabelana ngayo, ukubona ukuba iphela kanjani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ukudumba kwebhetri ye-iPhone Ndenza ntoni?
Kwenzeka into efanayo kum kwaye kwangaxeshanye. Bafuna ukutshaja ibhetri kunye nescreen, € 400 !!! Ngaba basombulule ingxaki kuwe?
Ndisebenzise i-iPhone ubomi bam bonke, ke ndiye ndadlula kwiimodeli ezininzi kwaye akuzange kwenzeke kum ukuba ibhetri inyuswe kancinci, nge-iPhone 11 yam eneenyanga ezisixhenxe zokusebenzisa bandixelele ukuba sele ingasebenzi. , basibuyisela kum, bandixelela ukuba isiqinisekiso asisebenzi kwaye ayisebenzi ngoku kwaye ukuba bayayivula bazakundinika yonke ivulekile kwaye akukho tyala, sisisombululo sodwa andinike yona kukuba ndihlawule iipesenti ezingama-7 zexabiso lilonke ukuze bandinike enye esebenzayo, ukuphoxeka kakhulu kwegama elingabizi kwaphela kwaye ngelishwa ndinezixhobo ezininzi 🙁
U-Eve cam uphononongo: ubumfihlo, umgangatho womfanekiso kunye neempawu zokhuselo oluphambili